Nihinana mofo sakay: mpianatra 60 mahery tratran’ny fanapoizinana ara-tsakafo | NewsMada
Nihinana mofo sakay: mpianatra 60 mahery tratran’ny fanapoizinana ara-tsakafo
Par Taratra sur 17/12/2019
Nisy ny nandoa, tsy vitsy ireo fanina… Nisy aza torana tsy nahatsiaro tena ka voatery novonjena haingana tetsy amin’ny HJRA, omaly. Izany no zava-nitranga tamin’ireo ankizy mpianatra 40 mahery, ao amin’ny sekoly katolika iray etsy Andravoahangy, tratran’ny fanapoizinana ara-tsakafo noho ny fihinanana mofo sakay, tao amin’ny toeram-pisakafoan’ny mpianatra ao amin’ity sekoly ity.
Ankizy manodidina ny 6 ka hatramin’ny 16 taona miisa 64 naiditra vonjimaika ao amin’ny vonjy aina (Urgences) etsy amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha, omaly antoandro, nanomboka tamin’ny 01 ora vokatry ny fanapozinana ara-tsakafo. Araka ny fantatra, vokatry ny fihinanana mofo sakay tao amin’ny “Buvette” iray ao amin’ilay sekoly katolika Saint François d’Assise ao Andravoahangy no nitera-doza. “Vao avy nihinana an’ilay sakafo aho, avy hatrany dia maina tanteraka ny tendako. Narary ihany koa ny kiboko ary nandoa sy nivalana avy eo”, hoy ny fanazavan’ilay mpampianatra, isan’ireo narary omaly, tetsy amin’ny HJRA. Ny sasany tamin’ireo mpianatra, hoy izy, nandoa sy nivalana. Nisy mihitsy ny nandoa ra tamin’izy ireo, ka nifandimby nivoaka sy niditra ny WC, izay tao anatin’ny fanadinana. Vokany, nihareraka ireo mpianatra, nisy ny tsy nahatsiaro tena intsony. Teo noho eo, fiarakaretsaka sy fiaran’olona tsara sitrapo no nitondra ireo mpianatra teny amin’ny HJRA raha nalefa teny amin’ny Clinique Ankadifotsy kosa ny sasany tamin’ireo narary noho ny fahafenoan’ny tetsy amin’ny hopitalin’Ampefiloha.
Ny fanadihadiana no namantarana fa nahatratra 80 teo ho eo ny isan’ireo narary vokatry ny fanapoizinana ara-tsakafo io, ka 12 tamin’izy ireo mpandraharaha ny sekoly raha manodidina ny 6 kosa ny tamin’ny mpampianatra sy ny talen-tsekoly. Isan’ny mbola tsy nahatsiaro tena ary tsaboina eny amin’ny hopitaly ihany koa ny mpahandro tao amin’ilay “Buvette”. “Vokatry ny fampiasana menaka efa lany daty no nahatonga ny loza rehefa avy nohamarininay tany an-tsekoly izany…” hoy ny loharanom-baovao iray hafa.
Mbola maro no tsaboina
“Efa tsy atahorana intsony ny sasany amin’ireo mpianatra ireo ary nalefa nody ny hariva ihany raha mbola tazonina sy arahi-maso ato amin’ny hopitaly kosa ny hafa”, hoy ny Profesora Rakoto Alson Aimée Olivat, talen’ny HJRA. Omaly hariva ihany, tonga nijery sy nanome fanampiana ireo niharam-boina ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, i Volahaingo Marie Thérèse.
Ankatoky ny fety isika izao, mitobaka eny an-tsena ny entana mora vidy izay isan’ny mahasarika ny mpanjifa. Mipetraka ary eto ny fanontaniana, nankaiza ary inona no ataon’ireo tompon’andraikitra maro samihafa manara-maso ny sakafo eny an-tsena? Eto, maro sahady ny narary, toy iny omaly iny.